Khuphela abaqhubi be-Samsung USB kwaye ulibale malunga ne-Samsung Kies | I-Androidsis
UPablo Aparicio | | Samsung, Tutorials
Kudala-dala, ukufaka ifayile I-Samsung USB abashayeli echanekileyo kwi-PC yeselfowuni ye-Samsung okanye ithebhulethi, kwakuyimfuneko ukufaka isoftware yaseKorea ebizwa ngokuba yiKies. Kodwa ukuba enye yezinto ezilungileyo malunga ne-Android yinkululeko yayo, kutheni bafuna ukundibopha ngokundinyanzela ukuba ndifakele olu hlobo lwesoftware kwikhompyuter yam ukufaka abaqhubi? Ukuba into esiyifunayo yeyothungelwano lwefowuni lweSamsung kunye nekhompyuter yethu ukunxibelelana, ngamanye amaxesha kuyimfuneko kuphela fakela abaqhubi be-Samsung
Kwi-Android sinokufikelela phantse kuyo nayiphi na into enkosi kuluntu lomphuhlisi kwaye hayi, akuyomfuneko ukufaka iSamsung Kies. Ukuba into esiyifunayo ngabaqhubi kuphela, sinokufaka kuphela abaqhubi. Kweli nqaku siza kukuxelela ukuba ungazifumana phi nokuba ungazifaka njani ukuze ukwazi ukuvalelisa kwisoftware iSamsung izama ukusixhasa.
1 Yintoni kwaye yintoni i-Samsung Kies?
2 Zithini iidrive ze-Samsung ze-Android?
3 Khuphela uze ufake iiDrive USB Drivers
3.1 Ukukhipha iinguqulelo ezindala
3.2 Ukufaka ipakethe entsha ye-Samsung USB Drivers
Yintoni kwaye yintoni i-Samsung Kies?
Nangona uthelekiso lungathandeki, kwaye ngakumbi kule ndiza kuyenza, singatsho ukuba iKies i iTunes iTunes. Nangona i-iTunes ikwabonelela ngeminye imisebenzi, ukulawula nantoni na kwi-iPhone, njengokufaka umculo, amaxwebhu okanye ukuvuselela inkqubo, kuya kufuneka sisebenzise i-iTunes, isixhobo endiyaziyo ukuba abasebenzisi abaninzi bayithiyile. Njengoko sifunda kwi iphepha elisemthethweni ukusuka kwi-Samsung, «Samsung Kies qhagamshela iselfowuni yakho kwiPC yakho, ukuququzelela ukungqamanisa idatha phakathi kwezixhobo kunye nokufumana usetyenziso olutsha«.
Ngokombono wam, nokuba kulula kangakanani ukwabelana nantoni na kwi-Android, ndicinga ukuba bambalwa abasebenzisi abafuna ukufaka i-Samsung Kies kwikhompyuter yabo kwaye eli nqaku lijolise ekuncedeni kule nkalo.
Khuphela abaqhubi abahlaziyiweyo kwiiterminal zeSamsung
Zithini iidrive ze-Samsung ze-Android?
Lo ngumbuzo abasebenzisi abaninzi abangenamava abasibuza wona. Umlawuli akakho ngaphezulu okanye ngaphantsi umqhubi, kodwa ligama leSpanish. IRAE ayilibandakanyi igama elithi "driver", kodwa isetyenziswa kakhulu xa sithetha ngekhompyutha kunegama "isilawuli". Kufana nokuthetha okanye ukubhala "iPC", izifinyezo ezithetha "iKhompyuter yobuNtu" esingasoze siyisebenzise ngeSpanish. Okona kungcono, ukuba besithe "Ikhompyuter" endaweni yokuthi "Ikhompyuter," singathi "Ikhompyuter yobuqu," sitshintsha ukuhleleka kwamagama.
Umqhubi (ukusuka kuMqhubi weSixhobo) okanye uMqhubi (ukusuka kuMqhubi weSixhobo) encinci Inkqubo yekhompyuter evumela i- Inkqubo yokusebenza inxibelelana nepheripherali (isixhobo esincedisayo nesizimeleyo okanye isixhobo esidityaniswe kwi-CPU), isusa izixhobo zekhompyutha kwaye inika ujongano lokusebenzisa isixhobo. Beka ngokulula, ukuze inkqubo yokusebenza ikwazi ukusebenzisa nasiphi na isixhobo sangaphandle, ifuna isoftware ekhethekileyo ukuze ikwazi ukunxibelelana nayo. Mhlawumbi omncinci akayikhumbuli, kodwa kwiminyaka elishumi eyadlulayo, ukuba akwazi ukusebenzisa nasiphi na isiphambuka, njenge Kwiwebhu camNgekhompyuter yeWindows, kwafuneka sifake isoftware eza neCD. Ngaphandle koko, kumaxesha amaninzi, uninzi (ukusuka kwi-XP) bafumanise ukuba kukho ikhamera, kodwa ayisebenzi. Abaqhubi abeza kwiCD (basaza kuza kwiimveliso ezithile zangoku) bebefanele ukugcina ikhamera isebenza kakuhle.
Khuphela uze ufake iiDrive USB Drivers
Ukukhipha iinguqulelo ezindala
Ngaphambi kokuba uqhubele phambili ukufaka inguqulelo entsha yabaqhubi abasemthethweni beSamsung, kufuneka ukucoca. Siza kwenza oku kucoca ngokumane sikhiphe iinguqulelo ezindala ebesinokuzifaka ngaphambili kwikhompyuter yethu. Ukwenza oku, siya kulandela la manyathelo:
Sivula iPaneli yokuLawula yeWindows.
Kanye kwiPaneli yokuLawula, sikhetha ukhetho "Yongeza okanye ususe iinkqubo."
Emva koko, siklikha kwiphakheji endala ye-Samsung Mobile driver kwaye emva koko kwi- "Uninstall / Change". Sinokwenza oku ngokunqakraza okwesibini kwiphakheji yomqhubi esifuna ukuyikhupha.
Silindile kwaye, xa inkqubo yokukhupha igqityiwe, siya kuba sikulungele ukufaka iphakheji yomqhubi omtsha.
Ukufaka ipakethe entsha ye-Samsung USB Drivers
Ukuba ukucoca kwakulula, ukufaka iphakheji yomqhubi omtsha we-Samsung kulula ngakumbi, kuba iyifayile ephumelelayo. Into ekufuneka siyenzile kukuzikhuphela kuzo LONTO, sebenzisa ifayile kwaye ulandele inyathelo iboniswe sisazisi sokufaka. Ukuba, nangasiphi na isizathu, ufakela abaqhubi kwikhonkco elidlulileyo kwaye awukwazi ukufikelela kwifowuni yakho ye-Samsung, unokufumana enye indlela yokukhuphela i-Samsung USB Drivers efumanekayo LONTO.
Ngayiphi na imeko, ukusuka 8 Windows Icandelo labaqhubi liphuculwe kakhulu kwaye ukusukela ngo-2012 andisafuneki ukufaka nantoni na ukuze ndenze naliphi na elisebenza ngamacandelo kunye nezinto zangaphakathi. Kude kube Windows 7 bekuyimfuneko ukufakela abaqhubi bebhodi yomama (ebandakanya abaqhubi bemizobo kunye namakhadi esandi), kodwa kungabi njalo. Ngayiphi na imeko, besifuna ukuhlaziya le post kuba kusekho uninzi lwenu olunengxaki yokufumana ifowuni yakho ye-Samsung kunye nekhompyuter yakho yokunxibelelana.
I-PC ayiyiboni i-Android yam, ndenza ntoni?
Ngaba ukwazile ukufaka ifayile Samsung USB Drivers kwaye ubenze basebenze?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » Samsung USB Drivers
Izimvo ezi-63, shiya ezakho
Kwaye nge-mac awuzukuyazi ukuba ndingazikhuphela phi..enkosi
Ndiyayithanda ifoto uFrancisco!
UMozozo Garcia sitsho
Luxury, enkosi indincede kakhulu 🙂
Phendula Mootzo García
Kwiposi ikhonkco ekugqibeleni nakwisicatshulwa
I-Nexus Gala sitsho
Ikhonkco lophukile. Ayifumaneki okanye ayikho. Ungayibeka kwakhona ikhonkco? Enkosi
Phendula kwi-Nexus Gala
http://www.mediafire.com/download.php?o29qjkxxoaopo8e Nantsi ikhonkco
veronica inene sitsho
Abaqhubi be-Samsung SII obafuna apha hamba http://adf.ly/NSJNk
Phendula u-veronica wenene
Kanye le ndiyifunayo enkosi
Molo uFrancisco, abaqhubi be-usb bandinceda ukuba ndincothule i-samsung galaxy s3 yam ngenkqubo ye-unlockroot, ndimtsha koku kwaye ndifuna ukwenza yonke into ngokufanelekileyo ngaphandle kwempazamo
Ewe ziyimfuneko kwikhompyuter ukuba ikwamkele ngokuchanekileyo isiphelo sakho kunye nayo yonke imisebenzi yayo.
ilungele i-samsung galaxy GT-S5360L?
Ndicinga ukuba isebenza kulo lonke uluhlu lwee-smartphones ze-Samsung ze-Android. Ngomhla we-13/02/2013 ngo-10: 03, "uDisqus" ubhale:
UJose Martinez sitsho
Ndikwanayo ne-GT-S5360L kwaye ne-PC yam khange ndiyamkele xa kufakwe abaqhubi…:
Phendula kuJosé Martínez
Ndinengxaki efanayo kwaye andifumani ndlela yokucoca ifowuni yam kwi-pc ...
UMichel Mtz sitsho
Ndinengxaki efanayo! D: amm ayinakufumana i-BCM21553-Thunderbird kunye ne-CDC yoLawulo lweModeli yokuThintela: C
Phendula uMicheel Mtz
molo francisco, ndine-ace gt-s5830m, kodwa ipc yam ayiyiboni. okanye kwii-kies kwaye sele ndikhuphele umqhubi we-samsung us kwaye akukho nto, njengoko ndenzayo ukuqaphela i-cel. Ndiyabulela kakhulu ngoncedo lwakho olukhulu. imibuliso evela cozumel
UCarolina ficco sitsho
ungayisombulula? Kwenzeka into efanayo nakum
Phendula u-carolina ficco
mhlawumbi ungasinika isifundo sendlela yokuyisebenzisa
Andina-galaxy sy nor kyes kwaye le ayiyiboni ifowuni nangayiphi na indlela
Ngaba iya kusebenza kwithebhulethi yesamsung ye-galaxy 7.2 gt p3113?
Ndiyayiqonda into oyithethayo kwaye iselfowuni ayindazi
igalaxi mini sitsho
Enkosi ngokulula, ayinakuba ...
Undisindisile .. hehe ngoku uba ndingabona isisele sam ukuba ndiyayidinga isamsung kies
Phendula kwigalaxi mini
UMiguel Amezquita sitsho
Ndandisele ndiyenzile ngaphambili kwaye iyasebenza kodwa ngoku ayisebenzi umntu angandixelela ukuba kutheni nceda
Phendula uMiguel Amezquita
Igalelo elihle lomhlobo, lisebenze kakuhle kakhulu kum. Iyaxatyiswa.
Mariano + Arg + sitsho
Umtsalane, ulula kwaye ngaphandle kwemithambo emininzi, iyayamkela iselfowuni yakho ngaphandle kofakelo lweSamsung Kies ... igalelo elihle kakhulu kwaye ndiyabulela kakhulu ...!
Phendula uMariano + Arg +
Enkosi, !!!!!! Bendivula ifestile ukuwisa ifowni !!!
Ungandixelela ukuba amanyathelo anjani ... Oko kukuthi, kufuneka ndidibanise ikhompyuter yam kwi-usb ngaphambi kokuyifaka okanye ukuba andikaze ndiyenze njani le nto:
kuvavanywa kwisamsung ye-galo ace isebenza ngokugqibeleleyo enkosi
Phendula kwi rano
Ingelosi pichardo sitsho
Molo, ndimtsha kule nto kwaye ndingathanda ukwazi ukuba ungathatha isigqibo sokuba uyisusa njani ibhloko yomsebenzisi kwi-samsung 5560 tocco
Phendula Ingelosi Pichardo
NdineSansung S4 iselfowuni apho ndicime khona ngempazamo ezinye iifayile ekubonakala ukuba yayingabalawuli beWIFI, iTV kunye nokwamkelwa kwezicelo zokufaka kwiselfowuni. Ndingayibuyisela njani iselfowuni okanye ndikope nje abaqhubi babuyele?
zifakwa njani kwi-android?
UYesu Martinez Hernandez sitsho
UFrancisco ingxaki yam kukuba i-sansung galaxy s2 yam ayifuni ukunxibelelana ne-pc kwaye ndinee-drivers ezifakelweyo kwaye andizame kwanto ngeendlela ezahlukeneyo kwaye ayifuni ukuqhagamshela i-galaxy yam ye-sansung ngaphandle kwe-chip inguqulelo ye-android yam Ngaba 4.0.4 ndincede andisazi ukuba ndenze ntoni ukudibanisa ifowuni yam kwi-pc
Phendula kuYesu Martinez Hernandez
Ndingayifaka njani kwakhona yonke into ekwigalaxy note 2?
Enkosi kakhulu, bendinexhala kakhulu, isebenza ngokugqibeleleyo, ulungile 😀
URafael Hernandez Uribe sitsho
Umhlobo obalaseleyo, enkosi kakhulu. Ndiphantse ndaneenwele ezingwevu eziluhlaza nalo mama de iposti yakho yandinceda enkosi.
Phendula kuRafael Hernandez Uribe
U-Everardo Garcia Vazquez sitsho
Kundisebenzisile enkosi madoda
Phendula u-Everardo Garcia Vazquez
molo xa ndifaka inkqubo indixelela ukuba ndinqamle isixhobo kwaye ayiqhagamshelekanga. ungandinika isisombululo xfa
Ngaba iyakusebenzela i-Samsung SGH-i677 ??? Sele ndikhangele yonke into kwaye andikwazi nje ukufumana ipc yam ukuba ibone iselfowuni !!! ...
Kwenzeka into efanayo kum, ubusazi ukuba ungayilungisa njani?
UJuan E. Viveros sitsho
Ndiyathemba ukuba bayayisebenzela i-samsung galaxy tab 3 lite
Phendula uJuan E. Viveros
Kumthala wam omncinci gt-s6310l ukudlala okuzenzekelayo kuvela kuphela kodwa kukhetho «Dlulisa iifayile» sebenzisa windows media player…. mka fuck
Molo, ndingathanda ukwazi amanyathelo ukuze ndikwazi ukukhuphela iifoto kwifowuni yam ukuya kwikhompyuter yam enenguqulo ye-wimdows xp. Ndidibanisa iselfowuni kwikhompyuter kwaye isixhobo asindifundanga. njengam?
UMILIANO A. sitsho
Phendula UMILIANO A.
Enkosi kakhulu ngegalelo lakho. Kwakukuphela kwephepha apho ekugqibeleni ndakwazi ukudibanisa iselula yam kwi-PC. Ndiyabulisa kwaye kwakhona, enkosi
Ndiyikhuphele kwiselfowuni yam, kodwa indixelela ukuba andinakuyivula, kwaye xa ndifuna ukuyidibanisa ne-pc yam ithi ayiyiboni
Enkosi ngegalelo, kholwa ndim, lindincede kakhulu… !!! XD
Ndithenge i-Samsung Ace S-5830-M malunga neminyaka emibini edlulileyo, ayikaze inike ngxaki de kube kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo, ndiyise kwinkonzo yezobuchwephesha kwaye bandixelele ukuba ineengcambu ze-Samsung Young GT-S-5360-L .
Nokuba ilungile le fowuni, ndingathanda ukuyigcina kwaye ndiyisebenzise. Ndingenza ntoni?
Ngalo lonke ixesha ndivula, inxenye yesikrini ibonakala ngathi yonakele kwibhokisi ye-Samsung Young GT-S-5360-L.
UJoaquin Bresan sitsho
Igalelo elilungileyo mhlobo, enkosi ngokwabelana.
Phendula Joaquín Bresan
Molo ekuseni, kuyenzeka ukuba umnyele wam we-s3, i-táticl ibhlokele izikhumbuzo kunye nendawo esezantsi yeselfowuni iyatshisa, abanye abahlobo bandixelela ukuba kufanelekile ukuba kukuchukumisa, kodwa indawo iyasebenza, omnye undicebisa ukutshintsha inkqubo yokusebenza, ndingaluvuyela uncedo malunga noko, ngokubhekisele
UHernán Rendón sitsho
Molo uFrancisco, igama lam ndinguHernán, ndinguVenezuela. NdineGalaxy S4, kufuneka ukuba ndiyicime enye into ye-Android. Xa ndivula ifowuni, ibhuthi ayigqibi, ihlala kwindawo emhlophe enemigca ethe tyaba eluhlaza okwesibhakabhaka, ndiyayisusa ibhetri, ndiyibuyisele ngaphakathi kwaye ngamanye amaxesha iyavuleka kodwa ngaphandle kwe "touch" iyasebenza, ngamanye amaxesha " touch "iyasebenza kodwa ayenzi ngxolo xa usilayida umnwe kwiscreen okanye ukukhala, yonke into iyasebenza kodwa okwemizuzu embalwa kwaye ishiywe ngaphandle kwebala.
Phendula Hernán Rendón
Ngokwenene ungukumkani wookumkani.
UMarcelo P sitsho
Bdia, ndiyikhuphele i-SAMSUNG_USB_Driver_for_Mobile_Phones (3), kodwa inkqubo yekhompyuter yam iyayivimba (Windows 10 ekhaya), ithi "Umlawuli uluvalile olu setyenziso", ndiye ndayiqhuba njengomphathi kwaye ndenza ukuba zingasebenzi izikhuselo zodonga, ezinye iingcebiso Ukuze ukwazi ukudibanisa i-Samsung GT-S5570L yam, enkosi
Phendula uMarcelo P
UJairo Bermudez sitsho
Phendula uJairo Bermudez
UEuclides Maldonado sitsho
Umtsalane. Xa umqhubi elahlekile kwi-fucking fart engcwele, yenye ingcwele ye-fucking kilombo yokubabuyisela. Enkosi
Phendula kuEuclides Maldonado
UJose Sierra Diaz sitsho
Kulungile, ndiyaxolisa ukungavumelani nokucaciswa kweli nqaku, ndicinga ukuba umsebenzi omninzi unokwenziwa ... okokuqala, kubonakala ngathi kuyabulala kum ukuba ubeka abaqhubi kwiserver yokukhuphela simahla njengokulayisha, kunye Lonke uluntu ehlabathini, ukuze lukwazi ukulufumana okwesibini, lubonise ukuba yipakethe yomqhubi entsha, ngaphandle kokuba inguqulelo yokugqibela, leyo ibixhonyiwe yi-1.5.9.0 kwaye sele ikwi-1.15.51.0 , kunye neyesithathu, ikhonkco liphi ingxelo esemthethweni kwaye lipapasha, kwiqela lesamsung lophuhliso, lilapha:
kwaye ngaphandle kokuba ulinde ukukhuphela kancinci kugcwele intengiso, njengale ndiyibonisayo kwinqanaba lesibini
Phendula kuJose Sierra Diaz
UJose Miguel sitsho
enkosi uthixo ngako konke
Phendula ujose miguel
Enkosi kulungile, ugqibelele. Isigidi esinye
UAndres Mendoza sitsho
Ndikwenzile konke oko, kodwa windows 7 ayiziboni i-S2 yam. Ndine-4.1.2 efakiweyo efakiweyo. Andinayo i-KIES efakiweyo, njenge Wondershare Mobile.
Indixelela eso sixhobo singaziwayo, kodwa nangona ndibabekile apho bakhoyo abaqhubi be-SAMSUNG, ayizamkeli kwaye iyaqhubeka isitsho eso sixhobo singaziwayo.
Ndizamile iintambo ezininzi kwaye ukuba bayazibona ezinye izinto ezihambayo, kodwa hayi le.
Bayayixabisa into endinokuyenza ukuyifumana.
Molo, andiziboni iifayile zeHuawei p9 kwiTV ngentambo ye-USB, kwaye iyandibetha ukuba ngumbuzo womqhubi
UYESU M. MARTINEZ H. sitsho
Ityala lam lelokuba ndicime abafowunelwa kwisamsung galaxy j7 (2016) yam.
sm-j710mn kwaye ndifuna ukuzibuyisa. Ndifundile ukuba kunye nabaqhubi ndingaskena imemori yangaphakathi kwaye ndiphinde ndiyifumane. kodwa ungayenza njani inyani.
Khange ndikwazi ukuyenza kwaye kubalulekile. Ndiyaluxabisa uncedo lwakho
Ndafaka into kodwa andiphumeleli kwanto
Phendula kuYESU M. MARTINEZ H.
Ngale ndlela ndinakho, kodwa khange ndikwazi ukufezekisa, andazi ukuba ndenze njani.
Khuphela i-Samsung USB Drivers kwaye ulibale malunga ne-Samsung Kies
http://www.androidsis.com Iifowuni ›I-Samsung
Ngezi ziDrive USB Abaqhubi unokwazi ukuqhagamshela isixhobo sakho se-Samsung kwikhompyuter yakho ngaphandle kokusebenzisa ii-Samsung Kies. Khuphela abaqhubi Apha.
IXiaomi Mi 5X iya kuboniswa ngoJulayi 26 kunye neMIUI 9
Thenga i-HOMTOM HT50 ngexabiso elingaphantsi kwama-90 euros